‘सेक्स’को उत्पत्ति कहाँ भएको थियो ? पत्ता लाग्यो यस्तो तथ्य::kamananews
‘सेक्स’को उत्पत्ति कहाँ भएको थियो ? पत्ता लाग्यो यस्तो तथ्य
वैज्ञानिकहरूले सबैभन्दा पहिले ‘सेक्स’को उत्पत्ति कहाँ भयो भन्ने कुरा पत्ता लागेको बताएका छन् । यस अघि मानिसहरूले यसलाई प्रकितिसँगै याएको प्रक्रिया मानेर यसबारे अनुमान समेत लागाउँदैनथे ।
”नेचर” जर्नलमा छापिएको एउटा लेखमा सबैभन्दा पहिले फुल पार्न छोडेर ‘सेक्स’का माध्यमले प्रजनन क्रिया सुरु गर्ने जीव ‘माइक्रोबेसियस डिकी’ प्रजातिको माछा थियो । आठ सेन्टीमीटर मात्र लंबाई भएको यो प्रागैतिहासिक जीव आज भन्दा लगभग तीन हजार आठ सय ५० वर्ष पहिले स्कटल्याण्डका प्राचीन तालहरूमा बस्थ्यो ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका डाक्टर म्याट फ्रीडम्यानले यस शोधका बारेमा भनेका छन्, ‘यो माछा प्लेकाडर्म समूह अन्तर्गत पर्दछ जुन स्कटल्याण्ड बाहेक संसारमा अन्यत्र पाइएको छैन ।
शोधका मुख्य लेखक, अस्ट्रेलियाको फ्लिडर्स विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जोन लङ्ग आफूहरूले जीवहरूको विकासक्रमको त्यस विन्दुलाई देखाउन सकेको बताउँछन् जहाँ बाट सबै जन्तुहरूमा आंतरिक निषेचनको प्रक्रिया सुरु भयो ।
प्रोफेसर लङ्गका अनुसार, एक दिन उनी प्राचीन माछाहरूका जीवावशेष राखिएको एउटा बाकसभीतर हेरिरहेका थिए, उनको ध्यान एम डिकी माछाको एल(L) आकारको अङ्गमा गयो । पछि विस्तृत अनुसंधान पछि यो भाले माछाको यौनांग रहेको पुष्टि भयो ।
अर्को तर्फ पोथी माछाको शरीरमा पछिल्तिर सानो हाडको ढाँचा रहेको थियो जसमा भालेको यौनांग अडकिने गर्दथ्यो । यसस्थितिमा बसिराख्न तिनका साना साना हात जस्ता पखेटाहरूले मद्दत गर्दथे ।
शोधकर्ताहरूको मतमा अन्तरिक निषेचनको यो पहिलो प्रयास लामो समयसम्म चल्न सकेन । माछाहरू फेरि अण्डाबाट नै प्रजनन प्रक्रियातिर फर्किए । त्यसको लाखौं लाख वर्ष पछि मात्रै माछाहरूमा यौनिक प्रक्रिया सुरु हुनसक्यो जुन सार्क र रे प्रजातिका माछाहरूका पुर्खाहरूमा देखा परेको थियो । एभरेस्ट दैनिक बाट
के तपाईको दिमागले गर्भवती हुँदा तपाईंको बच्चाको जस्तो ब्याबार गर्दछ?
कामना न्युज स्वास्थ्य समाचार काठमाडौँ – गर्भावस्था एक चरण हो जुन हरेक महिला द्वारा आनन्दित हुनुपर्छ। गर्भवती आमाको आनन्दित स्वभावले मात्र उनको स्वास्थ्यलाई जाँचमा राख्दैन तर यसको गर्भमा जीवनको स्वास्थ्य पनि राख्दैन। प्रत्येक पल र...